Total Fitness ( Hletan ) | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Total Fitness ( Hletan ) | Kamayut
Total Fitness ( Hletan )
Total Fitness Center ကို၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပြီး အမှတ် ၁၅-၁၉ ၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ၊ ကမာရွတ် မြို့နယ် တွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျယ်ဝန်းသန့်ရှင်းသောခန်းမ နင့် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီ အားကစားစက်များကို ထားရှိပေးခြင်းကြောင့် လာရောက်ကစားသူများကို အဆင်ပြေစေမှာပါ။
ကျွမ်းကျင်သော Trainer များလည်း အချိန်ပြည့်ရှိသလို ကစားသူရဲ့ Weight Gain ဖြစ်စေ၊ Weight Loss ဖြစ်စေ လိုချင်သော ပုံစံအမျိုးမျိုး အတွက် နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုလည်း သင်ကြားပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ Weight gain ကစားသူများအတွက်လိုအပ်သော အားဆေးများနှင့် ပရိုတင်းဖြည့်စွက်စာများကိုလည်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Customer များအတွက် Locker ၊ Towels ၊ Hot / Cold Shower စတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း customers များအတွက် စီစဉ်ထားရှိပေးထားပါသည်။ ဒါ့အပြင် ကျောက်မီးသွေးချွေးထုတ်ခန်း၊ ရေနွေးငွေ့ချွေးထုတ်ခန်းများလည်း ရှိပါသည်။ Yoga၊ Aerobic၊ Boxing၊ Zumba၊ Cardio/ HIIT စတဲ့ Group Class များကိုလည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ member ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်း တစ်လချင်းဈေးနှုန်းကို ၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ၃လဈေးနှုန်းကို ၁၃၅၀၀၀ ကျပ် ၊ ၆လဈေးနှုန်းကို ၂၄၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဈေးနှုန်းကို ၄၂၀၀၀၀ ကျပ် ဆိုပြီး ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရွေးချယ် ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်း အယောက် ၆၀ လောက်တစ်ပြိုင်တည်းဆော့လို့ ရပြီး စက်တွေကလည်းများတော့ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ ကစားနိုင်မှာပါ ။ စမ်းချောင်း ၊ ဆင်ရေတွင်း ၊ လှည်းတန်း စတဲ့ဆိုင်ခွဲ ၃ ဆိုင်ရှိပြီး ပိတ်ရက်လည်းမရှိတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာမှာ ဆော့လို့ရလို့ အဆင်ပြေပါသည်။ တနင်္လာနေ့ ကနေ သောကြာနေ့ အထိနံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားလို့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ စနေနေ့ နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တို့မှာတော့ နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၈ နာ၇ီအထိဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အေးစက်နေတဲ့ အဲယားကွန်းခန်းမ ကြောင့်လည်း ကစားရတာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိနေစေမှာပါ။ လှည်းတန်း အနီးတစ်ဝိုက် က gym ချစ်သူများ အတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။
05:36 PM - 05:36 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
15/19, U Tun Lin Chan Street, Kamayut Township, Yangon.
အနီးအနား Hletan မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Total Fitness Center was opened in 2017 and is located No.15-19, U Tun Linn Chan Street, Kamayut Township. It is spacious and latest equipment are available so that all customers will be comfortable. There are professional trainers here fulltime and willing to train by many techniques for the purpose of Weight gain or Weight loss. Many kinds of Protein Powder and Muscle-tech also available for purchase. The center offers locker, towels, hot/ cold shower. Steam Room, Sauna are also available and provided the group class such Yoga, Aerobic, boxing, Zumba and cardio/ HIIT. Member rates are fair and available many categories such as 50,000 MMK for 1 month member, 135,000 MMK for3months member, 240,000 MMK for6months member and 420,000 MMK for 1 year member. Capacity is large and providedalots of equipment and then 60 members can play together on the same time by no waiting period. It is convenience for the factor of open daily and two branches. It is easy for office staff by opening 6AM to 10PM on weekdays. On Saturday and Sunday, available 7AM to 8PM. There are comfortable for customers by cooling air condition hall. So we would like to describe for gym lovers who live in near Sanchaung and Myay Ni Gone.
Spa, Hair Saloon, Beauty Others
Latasha Hair and Beauty
ဧ၀ရတ် Hair & Makeup Beauty Salon
Public Gym ( Hledan )